Indlela flash ifoni, futhi uma kungenzeka nekuwusebentisa bebodwa?
omakhalekhukhwini Modern zinethuba lokuthuthuka, sibonga ngalo umuntu angasebenzisa inombolo enkulu uhla esibanzi kunazo amasevisi. Nokho, ngoba intuthuko kwezesayensi nakwezobuchwepheshe ihamba phambili izinyathelo omkhulu, ngesinye isikhathi kukhona isidingo reflash ifoni ukuze andise amandla ayo. Ngaphezu kwalokho, kukhona isidingo reinsertion kwenzeka ukuthi isofthiwe endala iselula isiqala luntengantenge, noma ngabe nje yisikhathi futhi nezidingo yesimanje.
Yingakho abaningi banesithakazelo indlela reflash ifoni futhi ukuthi ukuba bafeze lo msebenzi kungenzeka bebodwa? Ngokushesha kufanele kuphawulwe ukuthi impela force kumuntu ovamile, owazi ubuchwepheshe bama-computer futhi inolwazi olugcwele emkhakheni kolwazi nobuchwepheshe. Ngisho noma ungenayo ulwazi olufanele nge-Internet futhi ezikhethekile izinkundla namawebhusayithi enikelwe isihloko kuba njalo kungenzeka ukuba abuthele ulwazi oludingekile.
Ngakho, ukuze ukukhanya ifoni, okokuqala kunakho konke, kufanele babe nolwazi amagama, nokwazi ukuthi uyokwazi ukuqonda lokho okuhilelekile kubaluleke:
Flex (Flex) - uhlelo ifayela lisetshenziswa kwefoni ephathekayo lapho igcine ibhuku lamakheli, izinombolo zocingo, imisindo, imidlalo, amaringithoni kanye izicelo ahlukahlukene.
LangPack (lengpek) - lokhu iyithuluzi ngolimi kuhlanganisa amafonti, izilimi, kanye otolika. Uma kudingekile russify ifoni noma ukulungisa translation amaphutha, iphakethe software sizonikeza wabasiza
Reflash (Reflesh) - esetshenziswa ukuze ibuyekezwe, zonke izilungiselelo iselula zigcinwa.
Fullflash (fullflesh) - kuhlanganisa zonke amaphakheji ngenhla, kanye add-on ngesimo izinhlelo ezahlukene, imidlalo kanye multimedia izicelo, ezingalotshwanga kufakwe iphakethe esezingeni ifoni.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi imigomo eyisisekelo kanye imiqondo, ngeke vele ukwazi ukuhlunga kanjani reflash ifoni ngaphansi kwemigomo okudingayo.
Kwiwebhusayithi ekhethekile, ungathola zonke izinhlelo ezidingekayo futhi izicelo ukuthi angase abe usizo ifoni ephathekayo.
Ukuze ukuqaliswa inqubo reinsertion, sidinga okulandelayo:
noma ikhompyutha yakho;
abashayeli adingekayo ukuze umakhalekhukhwini kanye nedatha ye-USB;
Inguqulo yamanje ye-mobile phone firmware.
Lapho agqoke ifoni it is ngokuphelele indawo ye-software, khona-ke ingasetshenziswa manje njengoba ifoni entsha. Ukuze uqonde kangcono inqubo kuselula ingafaniswa kukhompyutha noma i-laptop. Thanda ikhompyutha, iselula kufaka central processing unit, inkumbulo okungahleliwe futhi okungezona oluyingozi (Mini-CD), ikhibhodi kanye esibukweni. Uma ikhompyutha has a BIOS (eziyisisekelo okokufaka-okukhipha ulwazi isistimu ukuthi amaphi iqala, ukulawula futhi ivivinya amadivaysi technical), khona-ke sabafowabo efonini ephathekayo wenza SW.
Namuhla, amafemu amaningi ukwazi indlela reflash ifoni cishe wonke amamodeli, ngakho ke uma ufuna ukushintsha ukucushwa kwefoni yakho ephathekayo, kuba impela ingenzeka. Ungenza le nqubo bebodwa, kodwa ukuthi odinga ukukwazi Ukubusa owodwa ezibalulekile: ngaphambi agqoke efonini yakho ke kuba isibopho ukwenza ikhophi yokugada ingozi isofthiwe ekhona. Ngokomthetho, lo msebenzi libizwa Yenza isipele. Ngenxa-ke, ungahlala ubuyele isofthiwe endala nazo zonke izilungiselelo ezikhona ngaphandle ubungozi bokulahlekelwa yedatha ebalulekile.
Vele flash ifoni Chinese ngoba uma kuqhathaniswa ne abakhiqizi European aqukethe nobunzima ezimbalwa kakhulu e-software. Ngenxa ekukhiqizweni Chinese mobile phones, kanye intengo eliphansi, abakhiqizi ozama ukuba izinkinga zokusebenza isofthiwe kuzo.
Kufinyeta bonke ngenhla, uzophawula Nokho, ukuthi akukho lutho nzima ku kunazo umakhalekhukhwini Siyafulesha, ukuqaliswa wayo elungile kuyadingeka selimazi. Ngokuhambisana zonke izidingo zokuphepha ngoba ukuphepha kolwazi kuselula yakho, ungakhathazeki. Ngakho manje siyazi kanjani reflash ifoni futhi okudingeka ukwenze.
Samsung 7562: Ukucaciswa, imiyalelo, izibuyekezo nezithombe
PCT - siyini lesi uphawu? Lisho ukuthini igama elithi the PCT ku iphone
Russia Phones: ukubuyekeza abakhiqizi
Imininingwane mayelana indlela yokwenza lokwela e "Maynkraft"
Isaladi zokudla - ukunambitheka kanye nezinzuzo
"Dermazol" (wamafutha): imiyalelo, impendulo, analogue
Yini-movie ukuze ubone, ukukhala?
Bangaki amaconsi 1 ml: imithetho ngokubala
Usizo lokuqala for nemivimbo
Layisha umsebenzi libhekene ... Physical umsebenzi umthwalo libhekene ukwanda kwenhliziyo
WaseByzantium isitayela izakhiwo eRussia
Enamandla itshe talisman ngoba Pisces zesifazane